Iza no Olaimpika anglisy nahomby indrindra? - Valiny Tsara Indrindra
Tena > Valiny Tsara Indrindra > Olimpika britanika - ny fomba fiasa
Olimpika britanika - ny fomba fiasa
Iza no Olaimpika anglisy nahomby indrindra?
Hahita lisitra toy izany ianao isaky ny Olympiad. Takelaka mampiseho ny isan'ny medaly azon'ny firenena tsirairay. Tsara sy mora izany, fa ny olana dia tsy milaza zavatra betsaka aminao izy io.
Ny haben'ny firenena iray dia misy fiatraikany lehibe amin'ny isan'ny medaly azony, koa ny fampidirana azy ireo amin'ireo firenena izay tsy manana olona an-jatony na an'arivony tapitrisa dia tsy rariny. Iza amin'ireo firenena no tena tsara indrindra amin'ny Lalao Olaimpika? Ny vahaolana mahazatra indrindra amin'ny olan'ny haben'ny firenena dia ny fanomezana laharam-pahamehana ny firenena amin'ny medaly mifanohitra amin'ny isam-batan'olona na medaly isaky ny olona. Raha ny marina dia manitsy ny habeny izy io ary manome ny firenena tsirairay vintana ny hahavita voalohany amin'ny medaly ankapobeny fa ny faha-49 amin'ny medaly isaky ny olona.
Medaly iray ihany no mendrika an'i Grenada, saingy satria manodidina ny iray hetsy monja ny mponina ao aminy, dia izy no medaly voalohany isam-batan'olona. Azo antoka fa ara-drariny kokoa io noho ny isa tsotra, saingy mbola misy ny olana. Mba hivelomana amin'ity latabatra ity alohan'i Grenada, dia tsy maintsy nahazo medaly 2.800 i Etazonia, mihoatra ny intelo heny noho ny tamin'ny Lalao Olaimpika iray manontolo.
Mbola ratsy kokoa aza izany ho an'i Sina: tsy maintsy mandresy 12000 mahery izy ireo. Na dia tsy ara-drariny ho an'ny firenena kely aza ny fanisana medaly tsotra, ny medaly isan-kapita dia mahatonga ny firenena lehibe tsy ho tonga eo an-tampon'ny latabatra. Tsy maintsy misy fomba tsara kokoa noho io.
Saingy rehefa nijerijery manodidina aho dia tsy nahita rafi-pitenenana manome vahana ny firenena lehibe sy ny kely. Ka nanao iray aho. Hita fa ny lakileny dia tsy fandrefesana medaly na isam-batan'olona, ​​fa ny azo atao.
Ohatra, diniho ny Olympiad teôria iray izay misy hetsika enina. Ny mpandresy rehetra dia avy amin'ny firenena telo: ny RedNation, izay mandrafitra 5% amin'ny mponina eran-tany, dia mahazo volamena 1; ny Blue Nation, izay manana 12%, dia mahazo medaly volamena roa; ary ny firenena Green Green midadasika, izay manana 30 isanjaton'ny mponina manerantany, dia mahazo medaly volamena telo. Raha jerena io fampahalalana io, firenena iza no nanao ny tsara indrindra? Miankina amin'ny.
Azonao atao ny manisy laharana azy ireo amin'ny totalin'ny medaly volamena, raha izany dia handresy ny maitso, na volamena isaky ny kapita, raha izany no handresy ny mena. Saingy aleo asehoy amin'ireo filaharana roa ireo amin'ny sary iray. Ireto ny medaly total ary eto ny medaly isaky ny kapita, noho izany dia tsara ny ambony sy ny tsara.
Ity misy mena, eto ny maintso, eto ny manga. Tampoka teo dia toa nanao ny tsara indrindra i Blue. Andao izao hiezaka ny hikajiana ny mety hitranga amin'ny firenena rehetra toa azy ireo koa.
Ohatra, amin'ny 30 isan-jaton'ny mponina eran'izao tontolo izao, Green dia hanana teorika 30 isan-jato handresy ny hetsika rehetra. Ka inona ny lesoka mety handreseny tsy latsaky ny hetsika 3 amin'ny 6? Azonao atao ny manao an'ireny kajy ireny amin'ny tanana, saingy misy ny metaly matematika antsoina hoe fizarana binomial cumulative izay hanome valiny mitovy amin'izany amin'ny tranga roa. Hay ny valiny dia manodidina ny 26%.
Ataovy ny kajy ho an'ireo firenena telo rehetra, ary hay izany Ilay firenena handresy kely indrindra tahaka an'i Blue. Blue, ny iray tampo aminy, kely loatra ka tsy hahazo medaly volamena betsaka indrindra ary lehibe loatra ka tsy ahazoana tombony lehibe amin'ny medaly per capita table, dia eken'ny fizarana binomial cumulative. Ary ny tena zava-dehibe, amin'ity fenitra ity, ny firenena telo dia nanana ny laharana voalohany.
Raha medaly volamena ny mena na ny maitso dia azony ny toerana voalohany. Ka inona no hitranga raha mampihatra an'io hevitra io amin'ny tena Olaimpika isika? Eny, somary sarotra kokoa io. Mihabetsaka ny isa, mihabe kely kokoa ny probabilima, ary manana loko medaly telo samihafa ianao.
Ka izao no raikipohy hitako: fizarana binomial telo mitambatra, iray ho an'ny volamena, iray ho an'ny volamena miampy volafotsy, ary iray ho an'ny medaly rehetra. Ireo nomerao telo ireo dia novaina tamin'ny logaritma hahafahany mitantana ary avy eo averina mba hahazoana isa izay manantena ny fahombiazan'ny firenena olympika tsirairay. Arakaraka ny maha ambony ny isa no tsara kokoa.
Ity no raikipohy nampiasako mba hanisana isa isaky ny firenena tamin'ny Lalao Olaimpika folo farany, ary nahagaga ahy ihany ny valiny. Araka ny Impressiveness-o-Meter, ireo mpitarika ankapobeny tamin'ny lalao ririnina sy fahavaratra dimy farany
Norvezy sy Aostralia. Tsy fantatro ny momba anao, saingy tsy nanantena an'izany aho. Amin'ny Lalao Ririnina Olaimpika, mandresy ny laharam-pahamehana amin'ny lalao Impressions-O-Meter i Norvezy ary ny lalao dimy farany an'ny tsirairay.
Laharana faharoa i Austria ary izy irery no firenena hafa nitana ny laharana voalohany tamin'ny Lalao Winter rehetra nanomboka ny taona 1998. Arahin'i Canada, Alemana, Suisse ary Netherlands. Amin'ny lafiny fahavaratra, manana ny laharana voalohany i Aostralia taorian'ny nandreseny ny lalao olympika telo voalohany tamin'ny taonjato faha-21, saingy mafana be i Britain rehefa nandresy tamin'ny Lalao fahavaratra farany roa.
Namita ny lampihazo teo amin'ny laharana fahatelo i Etazonia, narahin'i Russia, na dia heverin'izy ireo aza fa ny zava-bitany no tadiavin'izy ireo manoloana ny fandikan-dalàna. Avy eo tonga i Kiobà, Hongrie, France, Jamaica ary New Zealand. Raha toa ka tsy mifanohitra ny iray amin'ireto valiny ireto dia ity ny sary etsy aloha.
Tadidio fa medaly totalina ity pejy ity; medaly isaky ny kapita ity lafiny ity. Tsara ny ambony sy ny tsara. Ireto ny USA, eto New Zealand, Russia, Great Britain ary eto Australia.
Somary manjavozavo ihany amin'ny lafiny ririnina, fa ny mazava dia ny mitsoka ny olon-kafa rehetra avy ao anaty rano i Norvezy. Ary farany, eto ny dimy voalohany ho an'ny Lalao Olaimpika folo farany araka ny fahatairan'ny-metatra. Mariho fa i Alemana sy i Netherlands ihany no miseho amin'ny dimy voalohany amin'ny lalao fahavaratra sy ririnina.
Nouvelle Zélande dia firenena kely indrindra voatanisa ao anaty lohahevitra, misy olona latsaky ny 5 tapitrisa, ary Etazonia no firenena lehibe indrindra 323 tapitrisa. Ny lohalaharana akaiky indrindra dia tany Turin, izay medaly volamena efatra fotsiny no nety hitondra an'i Norvezy alohan'i Aotrisy. Norvezy, Aotrisy ary Kanada no eo amin'ny laharana voalohany amin'ny Lalao Ririnina rehetra, raha betsaka kosa ny hetsika amin'ny Lalao fahavaratra.
Ohatra, mariho ny fiakarana tampoka any Angletera sy ny fihemoran'i Rosia miadana. Mazava ho azy, misy zavatra maromaro tsy raisin'ny Impression-O-Meter. Tokony hamboarintsika ho tombontsoan'ny trano ve? Tokony hanisa bebe kokoa ve ny fanatanjahantena ekipa rehefa mifaninana ny atleta maro kokoa? Tokony hanisa bebe kokoa ve ny fanatanjahantena malaza? Ary ny fanatanjahan-tena manome medaly be dia be? Tokony hahazo fankasitrahana ho an'ireo atleta miofana ao anatin'ny sisintaniny ve ireo firenena, na inona na inona firenena nosoloany? Tokony ho kilemaina ve ny firenena noho ny hareny? Sa oram-panala? Amin'ny farany, tsy hisy fomba lavorary velively handrefesana ny fahombiazan'ny Olaimpika, fa farafaharatsiny mieritreritra aho fa ny mahavariana-o-metatra dia mety ho iray amin'ireo safidintsika ratsy indrindra.
Misaotra nijery ary miverina afaka roa herinandro izay handefasako lahatsoratra manaraka miaraka amin'ny valiny 2018 rehetra avy tany Pyeongchang.
Oviana i UK no nandresy ny Lalao Olaimpika?
Miavaka amin'ny làlana sy ny làlana, Bradley Wiggins diaGreat Britain lehibe indrindravoaravakaOlimpianamiaraka amina medaly valo, eo alohan'ireo mpiara-bisikileta namany Chris Hoy sy Jason Kenny ihany.
Fa maninona no tsy ao UK ny Team GB?
Ekipa GBno marika nampiasaina nanomboka ny taona 1999 an'nyanglisyFikambanan'ny olympika (BOA) ho an'nyGreat Britainary ny Olaimpika Irlandy Avaratraekipa. Natao hampitambatra nyekipaamin'ny maha vatana iray azy, na inona na inona fanatanjahantena manokana an'ny mpikambana tsirairay. Izy io dia ampahany amin'ny tetikady marketing, izay ahitan'ny tombony fa mahasoa.
Tongasoa eto UK (sy ny maro hafa) nambarako, C. G. P.
Volondavenona. Fanjakana Mitambatra? Angletera? Great Britain? Mitovy ve ireo telo ireo? Toerana samihafa ve ireo? Mihomehy mangingina ireo izay mampiasa diso ireo teny ireo ve ny anglisy? Iza no mahalala ny valin'ireo fanontaniana ireo? Fantatro izany ary holazaiko anao afaka fotoana fohy. Ho an'ny very - ity izao tontolo izao, ity no kaontinanta Eoropa, ary eto no toerana ilaintsika hamaha, ny faritra aseho amin'ny volomparasy dia ny Fanjakana Mitambatra.
Anisan'ny fisafotofotoana ny hoe tsy firenena tokana i Angletera fa firenena misy firenena. Ao anatiny dia misy firenena efatra mitovy sy manana fiandrianana izay i Angletera, aseho eto amin'ny mena. Matetika i England dia afangaro amin'ny Fanjakana Mitambatra amin'ny ankapobeny, izy no firenena lehibe indrindra sy be mponina indrindra ary ao anatin'izany ny renivohitra de facto, London.
Any avaratra dia i Ekosy, aseho amin'ny manga, ary any andrefana i Wales, aseho amin'ny fotsy, ary - adino matetika na dia ireo ao amin'ny Fanjakana Mitambatra aza - Irlandy Avaratra dia aseho amin'ny voasary. Ny firenena rehetra dia manana teny eo an-toerana ho an'ny mponina. Na dia azonao antsoina hoe 'British' daholo aza izy ireo, tsy soso-kevitra izany; satria ny firenena efatra amin'ny ankapobeny tsy mifankatia.
Ny Irlanda Avaratra, Skoto ary Welsh dia mahita ny anglisy ho tompona mpanjanaka mitondra andevo (tsy maninona na manana ny parlemanta itsinjaram-pahefana azy telo ireo ary mahazo mifidy amin'ny lalàna anglisy, na dia tsy ny mifanohitra amin'izany aza no izy), ary ny anglisy hevero ny ambiny amin'ny ankapobeny ho adala any ambanivohitra izay mandany fotoana be amin'ny ondriny. Na izany aza, satria tsy manana pasipaoro manokana ireo firenena mpiorina efatra dia olom-pirenena britanika daholo na tianao izany na tsia. Ianareo dia olom-pirenena anglisy ao amin'ny Fanjakana Mitambatra, izay manana ny anarany feno, raha ny tena izy, dia ny Fanjakana Mitambatra ao Great Britain sy Irlandy Avaratra.
Aiza no miafina i Britain? Eto indrindra no faritra rakotra mainty ao Great Britain. Tsy toa an'i Angletera, Scotland, Wales ary Irlandy Avaratra, Great Britain dia faritra ara-jeografika fa tsy teny politika. Great Britain no nosy lehibe indrindra ao amin'ny Nosy British.
Ao amin'ny UK, ny teny hoe 'Great Britain' dia matetika ampiasaina hilazana an'i - Angletera, Scotland ary Wales irery ihany - miaraka amina fanilihana an'i Irlanda Avaratra. Izany dia amin'ny ampahany betsaka, fa tsy tena marina, satria ny telo amin'ireo firenena mpiorina dia manana nosy izay tsy an'ny Great Britain: toy ny Isle of Wight (ampahan'ny Angletera). , Ny Nosy Wales any Anglesey, ny Scottides hebreo, ny nosy Shetland, ny nosy Orkney ary ny nosy Clyde.
Ny nosy faharoa lehibe indrindra ao amin'ny Nosy British dia i Ireland Land; toa an'i Britain n, dia jeografika izy io - tsy fehezan-teny ara-politika. Ny nosy Irlandy dia misy firenena roa: Irlandy Avaratra, izay efa noresahintsika, sy ny Repoblikan'i Irlandy. Rehefa miteny ny olona hoe 'Irlandey' dia miresaka ny Repoblikan'i Irlandy (izay firenena misaraka amin'i UK).
Na izany aza, ny Repoblikan'i Irlandy sy i Angletera dia samy mpikambana ao amin'ny Vondrona Eropeana - na dia i England manokana aza dia te-mody hoe nosy eo afovoan'ny Atlantika fa tsy 50 kilometatra miala ny morontsirak'i Frantsa - saingy tantara iray hafa izany. . Ny nosy roa lehibe indrindra amin'ny nosy Britanika dia Irlandy sy Great Britain. Irlanda dia manana firenena roa - ny Repoblikan'i Irlandy sy Irlandy Avaratra; raha i Great Britain kosa dia misy telo: Angletera, Ekosy ary Wales.
Ireo telo farany miaraka amin'ny Irlandy Avaratra dia mandrafitra ny Fanjakana Mitambatra. Mbola misy fanontaniana maro tsy voavaly: ahoana, maninona, rehefa mandeha any Kanada ianao dia misy mpanjaka anglisy manefa vola? Mba hamaliana izany dia mila miresaka momba ny Fanjakana isika. Tsy afaka nianatra tany amin'ny tontolo miteny anglisy ianao raha tsy nahalala fa ny Fanjakana Britanika dia ampahefatry ny tany ary nanjaka 1/4 tamin'ny mponina eran'izao tontolo izao.
Na dia mora aza ny mahatadidy ireo ampahany tamin'ny Fanjakana Britanika izay nosimbana an-keriny, dia matetika no hadinontsika ny isan'ny firenena nahazo fahaleovan-tena tamin'ny alàlan'ny diplaomasia fa tsy nandatsa-dra. Ireo firenena mety ho firenena ireo dia nanao fifanarahana tamin'ny Empira: izay hanohizan'izy ireo hatrany ny fanekena ny Monarchyas ho loham-panjakana ho takalon'ny parlemanta iray mahaleo tena. Raha te hahafantatra ny fifandraisan'izy ireo dia mila miresaka momba ny satroboninahitra isika.
Tsy ny satroboninahitry ny nofo - fa mipetraka ao ambadiky ny vera ao amin'ny Tower of London izy, ary mandray mpizahatany an-tapitrisany maro ho an'i Great Britain - fa ny satroboninahitra kosa ho toy ny antokon'olona sarotra sy ara-dalàna izay azo eritreretina tsara ho orinasa tokana. Iza no namorona ity orinasa ity? Andriamanitra no nanao izany. Araka ny fomban-drazana anglisy, dia miankina amin'Andriamanitra ny fahefana rehetra ary satro-boninahitra amina fombafomba kristiana ny mpanjaka.
Na izany aza, Andriamanitra, izay tsy maniry ny ho micromanage, dia manendry ny heriny ho amin'ny tarika antsoina hoe satro-boninahitra. Raha io no satroboninahitry ny vatana tamin'ny Tower of London, dia niova ho fikambanana ara-dalàna izy io rehefa nandeha ny fotoana. afa-tsy ny mpanjaka monja no mitondra azy. Ampahatsiahivina mahasoa fa mbola teokrasia ara-teknika i UK: miaraka amn'ny fanjakana mpitondra ary izy no governora faratampon'ny fanjakan'ny fanjakana ofisialy: ny anglikanisma no hafahafa mifandraika amin'ny fanjakan'ny mpanjaka an'arivony Pop up.
Miverina any Canada sy ny sisa. Ireo zanatany taloha, izay nahazo fahaleovan-tena tamin'ny alàlan'ny diplomasia ary nanohy nanaiky ny fahefan'ny satro-boninahitra, dia fantatra amin'ny hoe Commonwealth Realm. Mihena ny filaharan'ny isam-ponin'izy ireo: Canada, Australia, Papua New Guinea, New Zealand, Jamaica, Solomon Islands, Belize, Bahamas, Barbados, St.
Lucia, St.Vincent ary ny Grenadines, Grenada, Antigua ary Barbuda, St. Kitts sy Nevis ary Tuvalu.
Firenena mahaleo tena izy rehetra nefa mbola manaiky ny fanjakan'ny fanjakana ho lohan'ny fanjakana (na dia tsy manana fahefana tena izy aza ao anatin'ny sisintaniny). Misy orinasa telo hafa an'ny Crown ary ity ny Crown Dependencies: ny Nosy Man, Jersey, ary Guernsey. Tsy toy ny Commonwealth Realm, izy ireo dia tsy heverina ho firenena mahaleo tena, fa kosa mahazo ny fizakan-tena eo an-toerana avy amin'ny fanjakana Crown sy Britanika avy amin'ny Fanjakana Mitambatra (na izany aza, manana ny fahefana hanohitra ny lalàna mifehy ny fivorian'ny fiangonana eo an-toerana).
Vita daholo ve isika izao? Saika, fa tsy tena; mbola misy kofehy malalaka vitsivitsy, toa an'ity toerana ity: tanàna kelin'i Gibraltar any amin'ny morontsiraka atsimon'i Espana. Malaza noho ny vatolampy, ny gidro ary ny fihenjanana ara-diplaomatika eo anelanelan'ny UK sy Espana, fa ahoana kosa ny Nosy Falkland, izay niteraka fihenjanana be teo anelanelan'ny UK sy Arzantina ka nahatonga azy ireo hiady amin'izy ireo Places dia an'ny vondrona fanjakan'ny satro-boninahitra farany fantatra toy ny: Teritery ampitan-dranomasina britanika, fa ny anarany teo aloha, 'Crown Colony,' dia mamadika ny fiaviany. Izy ireo no akanjo farany an'ny Fanjakana Britanika.
Tsy toy ny Commonwealth of Nations, tsy lasa firenena mahaleo tena izy ireo ary manohy miantehitra amin'ny Fanjakana Mitambatra ho an'ny tafika ary indraindray tohanana ara-toekarena. Toy ny zanatany satro-boninahitra, teratany anglisy ny teraka rehetra ao anatin'ny sisintaniny. Ny zanatany Crown dia mihena ny isan'ny mponina: Bermuda, ny Cayman Islands, ny Turks and Caicos Islands, Gibraltar, the British Virgin Islands, Akrotiri and Dhekelia, Anguilla, Saint Helena, the Ascension Islands, Tristan da Cunha, Montserrat, the British Indian Ranomasimbe Terrain, South Georgia ary ny South Sandwich Islands, the Falkland Islands, the British Antarctic Territory and the Pitcairn Islands.
Ho an'ny sary Venn farany: Ny Fanjakana Mitambatra dia firenena ao amin'ny Nosy Britanika ary an'ny satro-boninahitra fehezin'ny fanjakan'ny mpanjaka. Anisan'ny satro-boninahitry ny satro-boninahitra sy ny Nosy Britanika ihany koa ny fiankinan-doha amin'ny sisa tavela amin'ny satroboninahitry ny Fanjakana teo aloha ary ireo faritany ampitan'ny anglisy any ampitan-dranomasina. Misaotra anao nijery!
Iza no ao amin'ny ekipa Olaimpika Britanika?
Emily Borthwick: atletisma - fitsambikinana avo lenta ho an'ny vehivavy.
Tom Bosworth: Atleta: hazakazaka 20km lahy.
Holly Bradshaw: Atleta - tranon'ny vehivavy.
Andrew Butchart: Atleta - lehilahy 5 000m.
Taylor Campbell: atletisma - marotoa lehilahy.
Cameron Chalmers: Atletisma - 4x400m an'ny lehilahy.
Zoey Clark: Atleta - 4x400m vehivavy.
>> IZAO C WEOME CKUP AN'NY SHIRT TSY NITENY NY AKIVISTA ATHLETE IZAO TSY IZAO NO NATAON'NY BERRY VOALOHANY NY ZON'OLONY FIADIAVANA. TAORIAN'NY FANDRESENA EMASERA AMIN'NY HAMMER THROW TAO AMIN'NY FOLO FOLO PAN AM GAMES, tongotra lehibe dia lehibe, NOHON'NY NATAON-TSAINA IZANY, IZY DIA NAMONO AN'OLO AN'NY DOLLARS >>, MISAOTRA NY TANORA TANORA TANORA LOHA HEVITRA. FOMBA AN'NY AMERIKANINA IZY ARY FIASA ATTELY ATHLETE NASAINA HAMMER BRO SY.
EO AMIN'NY fahenina amin'ny lisitra rehetra. Izy koa dia nitazona ny firaketana an'izao tontolo izao noho ny fiandrasana an'i OH napetraka ao amin'ny fitopololahy. IZAO IZAO dia tonga aty amiko mba hamaly an'i BALASHFFORA amin'ny GAME TOKYO TOERA FOLO FOLO.
FA NY MANARAKA. >> NY FIVORIAMBENANA mediana izay noravahanao tamin'ny jeneraly hafa ary namboarinao ny akanjon'Athlété ho an'ny lohany sy mandritra ny fotoana fohy. AZO ATAONY SA ATAON'NY HEMN HETSIKA. >> TSY MISY SAFIDIANA NA FITAKIANA MBA HANATRIKA NY PODIUM.
REHEFA MIHIRA E ON >> HITANAO AN-TSAINA NY VAVOLOMBELONDRANA ARY NITSORATRA MBA HITSANGANA AMIN'NY PODIUM .. >> ARY MILALAO AMIN'NY HEMN.
TAMIN'IZAO ZAVATRA IZAO dia Mahatsiaro aho. SOSO-KEVITRA SATRIA IZAHO MBOLA HETY AMIN'NY Toro lalana izay tsy izy. NY INTENSIVE NY INTENTION MANINO FA TSY? TE HANTARAO FA MAHALALA ANAO IZANY FIZARANA. >> TANTARA RAHA Mahafantatra ny tantaranao ianao dia ho fantatrao ny hira feno an'ny hiram-pirenena. >> MITENY NY VONDRO VOLOMBELY. >> ZAVATRA ROA AO AMERIKA NY VOAFITSIN'NY RANTSIKA ARY NANATSIKA NY FAHALALANA REHETRA IZAY TSY MAINTSY ATAONTSIKA FA IZAO NO HATAON'NY HEVITREON'ANDRIAMANITRA AMIN'NY FOMBA TE HANOMPOANA FOMBA FANAMARIHANA NA HANAPAKA IZAY HITANAO AMIN'NY Jiro MAZAVA, INONA NO AZONAO ATAO AMIN'NY VAHOAKA IZAO IZAO NAHOANA IREO TEAM U. IREO
AZA ATAO NY SARY. >> Tsy nilaza mihitsy aho hoe tsy tiako ny olona ankehitriny, fa tia ny fianakavian'izy ireo koa izy ireo. Fantatray fa avy tany amin'ny tokantrano iray ianao no nahatongavanao.
TONGAVA AMIN'NY TELOFOLO
Iza no Olaimpika lehibe indrindra amin'ny fotoana rehetra?
Milaza izany ny antontan'isarehetramomba an'i Phelps, ilay voaravaka be indrindraOlimpianaeo amin'ny tantara misy medaly 28, anisany volamena 13.1 andro lasa izay
Iza no atleta Olaimpika lehibe indrindra amin'ny fotoana rehetra?
Lalao olympika ambonyMpandresy medaly lisitra roa, laharanaatletatamin'ny medaly betsaka indrindra, ary tamin'ny medaly volamena tanteraka koa no nandresy. Michael Phelps dia mitarika ny lisitra roa.05.17.2021
Iza amin'ireo vehivavy britanika no nahazo medaly olympika betsaka indrindra?
Katherine diaBritain's mostvoaravakavehivavy olimpikaatleta amin'ny fotoana rehetra sy ny voalohanyVehivavy anglisynymandresy medalyamin'ny dimy mifandimbyLalao OlaimpikaLalao. Anisan'izany ny tsy hay hadinoinavolamenamedaly tany London 2012, izay nanaraka volafotsymedalyany Sydney, Athens ary Beijing.
Fa maninona ny Team GB no tsy mandeha amin'ny Lalao Olaimpika?
Team GB'satleta hanaotsykendrena medaly ho an'ny TokyoLalao Olaimpikataorian'ny nanambarana azy fa manao izany ny matihaninatsymanana antontam-baovao ampy hanaovana vinavina marina, noho ny areti-mandringana Covid. Nilaza i England fa matoky tena izyEkipa GBhandray atleta 375 any Tokyo mihoatra ny sivynandehamankany Rio.10. 2021.
Firenena ve i Angletera?
Tahaka an'i Wales sy Scotland,Englanddia matetika antsoina hoe afirenenafa tsy fanjakana manana fiandrianana. Io no lehibe indrindrafirenenaao amin'ny Fanjakana Mitambatra na ny tanety na ny isam-ponina dia nandray anjara toerana lehibe tamin'ny famoronana ny UK, ary ny renivohiny London koa dia renivohitr'i Angletera.
Hitranga ve ny Lalao Olaimpika amin'ny 2021?
Ny Iraisam-pirenenaLalao OlaimpikaNy Komity (IOC) dia hentitra ao TokyoLalao Olaimpikamanomboka araka ny fandaharam-potoana ny 23 Jolay, arahin'ireo Lalao Paralimpika amin'ny 24 Aogositra.05/31/2021